Ny fahalianana izay miteraka ny fivoaran'ny zaza ao an-kibo dia tsy mamela ny reniny hatrany am-boalohany ny fizotry ny fitondrana. Na dia izany aza, ny angona azo avy amin'ny fandalinana isan-karazany dia tsy voatery foana, ary ny fifanakalozan-kevitra ao amin'ireo toeram-panjakan'ny toekarena dia tsy misy hafa amin'ny antsipirihany sy ny fahatsorany. Hanandrana hanoritsoritra amin'ny antsipiriany bebe kokoa izahay ary hahitana ireo indostrialy fototra momba ny fitomboana sy ny fampiroboroboana ny foetus mandritra ny herinandro maromaro.
Teti-bola fetalin'ny herinandro
Mba hanamorana ny asan'ny mpitsabo sy ny mpitsabo, dia nisy latabatra manokana noforonina, izay ahitana ny fampitomboana tsara indrindra ny fivoaran'ny zaza hatramin'ny fiandohan'ny fitondrantena. Noho izany dia azo atao ny mampifanaraka ny fatran-tsasatry ny foetus amin'ny herinandro miaraka amin'ny dingan'ny fitondrana vohoka, ny toe-javatra ankapobeny ny reny sy ny zaza, mba hahazoana sary marina momba ny fivoaran'ny zaza, sy ny sisa. Ny fisian'ity fampahalalana ity dia manome fahafahana ny reny hanamarina ny fahamarinan'ny vokatry ny ultrasound na fomba fikarohana hafa.
Inona no habetsahan'ny foetus mandritra ny herinandro?
Te-hanamarika fotsiny fa ny fampahalalana etsy ambany dia tsy miovaova, ary tsy mila manahy ianao raha kely dia kely na lehibe kokoa ny "size" an'ny zanakao. Ny bevohoka tsirairay dia fomba iray tsy manam-paharoa sy miavaka ny fahaterahan'ny fiainam-baovao iray, izay tsy mitovy mihitsy. Noho izany, inona ny habetsaky ny foetus amin'ny dingana samihafa amin'ny fahamatorana:
Ny haben'ny embryon, nahatratra ny 4 herinandro, dia mahatratra 4 mm ary, angamba, ny vehivavy dia efa mahafantatra ny fisiany.
Efa eo amin'ny valo herinandro izao ny embryon dia afaka "mirehareha" amin'ny fitomboana 3 santimetatra, ary eo amin'ny mpanara-maso ny fitaovana ultrasound, no jerena ny drafitra amin'ny hoavy.
Ny habetsaky ny foetus amin'ny 12 herinandro dia miova amin'ny 6 ka hatramin'ny 7 santimetatra. Manomboka mihamitombo tsikelikely ny vadin'ny vehivavy, manome toerana bebe kokoa ny ankizy amin'ny fampandrosoana.
Amin'ny faran'ny volana faha-4 amin'ny famoahana ilay zaza dia mahatratra haavony 15-16 santimetatra, manefa grama 150 ary mivezivezy am-bava ao amin'ny balsama foetal.
Ny habetsaky ny foetus amin'ny herinandro 22 dia 30 santimetatra, ny taova sy ny rafitra manontolo dia miasa tanteraka.
Ny herinandro 33-36 dia miavaka amin'ny fahavononan'ny zaza teraka. Ny fitomboany dia mahatratra 45-50 santimetatra, ary ny lanjany dia miovaova eo amin'ny 3-3,5 kg.
Ao anatin'ny taovam-pananahana, indrindra raha misy fihenan-taonan'ny fiantrana, dia ilaina ny manala ireo mari-pamantarana hafa momba ny fivoaran'ny foetus. Diniho ny ankamaroan'izy ireo, izay misarika ny sain'ny mpitsabo sy ny mpitsabo.
Ny fahazoana ireo endri-javatra ireo dia ilaina mba hanondroana ny vanim-potoan'ny fitondrana sy ny fomba fiasa izay hitranga amin'ny fiterahana. Satria izy no lohan'ny zazakely miditra voalohany amin'ny lakandrano ary ny enta-mavesatra dia avo dia avo, avy eo mametraka ny endriny, ny haben'izy ireo sy ny habeny dia zava-dehibe tokoa.
Ny fetalin'ny foetus Coccyx-parietal
Ity mari-pamantarana ity dia refesina mialoha ny herinandro faha-11 amin'ny fitondrana, satria amin'ny ho avy dia lasa tsy dia mazava loatra ny angona. Noho ny fitomboana sy tahirin- tsolotry ny CTF amin'ny foetus, azo atao ny mametraka ny taonan'ny zaza, ny lanjany sy ny halavany, mandritra ny herinandro . Izany dia atao amin'ny fanampian'ny ultrasound.
Ny habetsaky ny cerebellum an'ny foetus amin'ny herinandro
Ny fandinihana ireo endri-javatra ireo amin'ny fotoan'ny taom-piotazana dia manome ny mpitsabo arakaraky ny fahafahana mampifandray ny dingana fampandrosoana sy ny haben'ny tsimok'aretina mandritra ny fitondrana vohoka, mba hahazoana fampahalalana feno momba ny mety ho fiovan'ny génétique, mba hanombanana ny toetry ny vatan'ny zaza sy ny sisa. Ny cerebellum, amin'ny ankapobeny, dia tompon'andraikitra amin'ny fametrahana ny rafitra sy ny taova.
Ny haben'ny lohan'ny foza amin'ny frontal-occipital
Ireo endriky ny endriny ihany koa dia manondro ny vanim-potoan'ny fifindrana ary mamaritra ny tsy fitoviana eo amin'ny habetsahan'ny foetus mandritra ny fitondrana vohoka. Ny angon-drakitra dia arotsaka amin'ny masinina ultrasound na amin'ny fomba samihafa araka ny fehezanteny mahazatra.
Fihetsehana mandritra ny fiterahana
Azo atao ve ny mitondra bevohoka amin'ny ala?
Ny soritr'aretina zaza tsy ampy taona
Grippferon nandritra ny fitondrana vohoka
Ahoana ny tsy tokony hatahorana mandritra ny fitondrana vohoka?
Ny firaisana ara-nofo tany am-piandohana
Lanja loatra amin'ny bevohoka
Bartholinitis amin'ny fahantrana
Snoop zaza amin'ny maha-bevohoka
Orima Cerebral amin'ny zaza vao teraka
Ny fotoana tsara indrindra hitadiavana ankizy
Fatina fanatanjahan-tena ho an'ny atleta
Ny fitaratra gynecolojika ho tsy misy dikany
Lamina fanoherana mitafy lamandy
Efitrano fandraisana an-dakozia klasika - hevitra vaovao ho an'ny fananganana fifanakalozan-kevitra sarobidy
Sakafo ao anaty saosy katsaka
25 sary diso avy amin'ny andiam-balala "manala baraka, manapaka ary mandresy"!
Sivana ambany ho an'ny akquarium
Inona no ho lamaody mandrakariva?
Orange - votoatin'ny kalorie
Afaka mampinono ny reniko ve aho?
Dresses long 2016
Chandelier ao amin'ny efitranon'ny ankizy ho an'ny tovovavy iray